नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कको हालसम्मकै ठूलो आईपीओ आजदेखि, ख्याल गर्नुपर्ने ५ कुरा ! – Palika Times
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कको हालसम्मकै ठूलो आईपीओ आजदेखि, ख्याल गर्नुपर्ने ५ कुरा !
पालिका टाईम्स २ माघ २०७७, शुक्रबार प्रकाशित
२ माघ, काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क (निफ्रा) को साधारण शेयर खुला भएको छ । सो बैङ्कको ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर शुक्रबारदेखि बिक्रीका लागि खुला गरिएको हो । यो शेयर हालसम्म बजारमा जारी भएका साधारण शेयरमध्येकै सबैभन्दा ठूलो हो । यो शेयरका लागि आगामी मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।